Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Wargaysyada Ingiriisku Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Jimce Ah Iyo Xidigaha La Kala Doonayo. – kulaaad.com
Jimce wanaagsan akhristayaasha sarafta lehow meel kasta oo aad aduunka ka joogtaan, kuna soo dhawaada barnaaamijkeenii maalin laha ah ee aanu sida joogtada ah idiinku soo gudbino waxyaabaha ay wargaysyadu ka qoraan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmay July 1, waxayna kooxuhu si wayn ugu hawlan yihiin in ay la soo saxiixdaan ciyaartoyda ay u arkaan in ay horumarin ku samayn karaan safafka kooxahooda ka hor inta aanu bolaamin xili ciyaareedka cusubi.
Kooxaha horyaalka Premier Leaque-ga ayaa haddaba samaynaya saxiixyo muhiim ah laakiin ilaa hadda may helin ciyaartoydii bartilmaameedka ugu muhiimsan u ahayd. Ilaa hadda kooxaha Man United, Liverpool, Chelsea iyo Manchester City ayaa sameeyay saxiixyo aan badnayn balse kooxda Everton ayaa ah tan horyaalka Premier Leaque-ga ka yaabsanaysa ee saxiixyada ugu badan samaysay.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Antonio Conte ayaa si wayn uga cadhaysan guuldarada suuqa kala iibsiga ee kooxdiisa Blues kadib markii ay Manchester United heshiis la gaadhay bartilmaameedkii kowaad ee Antonio Conte doonayay ee Romelu Lukaku wuxuuna markale shaki soo galay mustaqbalka Conte.
Kooxaha Liverpool iyo Tottenham ayaa ku tartamaya saxiixa xidiga kooxda Leicester City ee Demarai Gray laakiin xidiga ayaa doonaya in uu ku biiro kooxda u balan qaada in uu boos ka helayo shaxda kooxdeeda kowaad. Leicester City ayaa iyaduna 25 milyan oo gini ku doonaysa da’yarka Man City ee Kelechi Iheanacho.
Heshiiska uu Romelu Lukaku ugu soo biirayo Manchestr United ee 75 ka milyan ee gini ah ayaa dardar galiyay bixitaankii Wayne Rooney ee Old Traffrod isaga oo ku sii dhawaanaya in uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Everton.
Real Madrid ayaa markale la xidhiidhay da’yarka AS Monaco ee Kylian Mbappe waxayna usheegeen in uu iyaga fisho marka ay iska iibiyaan Alvaro Morata iyo James Rodriguez kuwaas oo la filayo in ay xagaagan ka bixi doonaan kooxda Los Blancos.
Difaaca Manchester United ee Cameron Borthwick-Jackson ayaa si la mid ah xidigo badan oo hore ka bixi kara Old Traffrod isaga oo da’yar ah waxaana doonaysa kooxda Leeds.
Fabian Delph ayaa Manchester City ka bixi kara iyada oo kooxda Stoke City soo noolaysay xiisihii ay u qabtay xidiga ree England waxayna ku doonaysaa 12 milyan oo gini.
Nemanja Matic ayaa ka cabsi qaba in riyadiisii ahayd in uu Mourinho kula midoobo Old Traffrod ay kooxdiisa Chelsea horjoogsan doonto iyada oo waliba Mourinho uu Blues ku garaacay saxiixa Romelu Lukaku oo bartilmaameedka kowaad u ahaa Conte.
Liverpool ayay soo gaadhay dhibaato dhinaca suuqa kala iibsiga ahi kadib markii ay kooxda ree Germany ee RB Leipzing sheegtay in ayna jirin sabab ay iskaga iibin karto xidigaha kooxdeeda ugu muhiimsan oo uu ku jiro bartilmaameedka kowaad ee Klopp uu doonayay ee Naby Keita.
Chelsea ayaan meesha ka saarin in ay Real Madrid isdhaafsan karaan Eden Hazard iyo James Rodriguez oo midba garoonka kooxda kale laga doonayo.
Manchester United ayaa tixgalinaysa in ay u dhaqaaqdo soo xero galinta xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Julian Weigl iyada oo aan ilaa hadda helin bartilmaameedkii Mourinho ee Fabinho iyo Matic.
Chelsea ayaa ku dhaw in ay la soo wareegto gool dhaliyaha kooxda Swansea City ee Fernando Llorente kaas oo uu Antonio Conte bishi january ku dhawaaday inuu markale Stamford Bridge kula shaqeeyo iyaga oo hore ugu soo wada shaqeeyay Juventus.
Macalinkii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa sheegay in haddii uu wali ahaan lahaa tababaraha Manchester United in uu la soo saxiixan lahaa kabtankii Chelsea ee John Terry kaas oo dhawaan si xor ah ugu biiray kooxda Aston Villa.
Mustaqbalka difaaca kooxda Arsenal ee Hector Bellerin ayaa lagu xalin doonaa kulan uu la yeelan doono macalinka kooxdiisa ee Arsene Wenger. Bellerin ayaa doonaya in uu dib ugu laabto kooxdisii carruurnimo ee Barcelona taas oo diyaar u ah in ay dalabkii ugu horeeyay ku tijaabiso Gunners.
Kooxda RB Leipzing ayaa Liverpool u sheegtay in ay iska ilawdo xidigeeda Naby Keita waxayna kooxda ree Germany muujisay in ayna wax baahi ah u qabin oo ay ciyaartoydeeda muhiimka ah u iibin karto.
Wakiilka xidiga khadka dhexe ee Jorginho oo ka tirsan kooxda Napoli ayaa meesha ka saaray in Arsenal ay wax xidhiidh ah kala soo samaysay heli taanka xidigan.
Manchester United ayay qasab ku noqonaysaa in ay sugto ilaa suuqa bisha January si ay ula soo wareegto difaaca kooxda Benfica ee Nelson Semedo.Tababaraha kooxda Everton ee Ronald Koeman ayaa talefoonka kala hadlay gool dhaliyaha kooxda Arsenal ee Olivier Giroud kaas oo ay Everon ku doonayso 20 milyan oo gini.
Riyad Mahrez ayaa la filayaa in uu kooxdiisa Leicester City uu la bilaaban doono kulamada xili ciyaareedka ka horeeya iyada oo aan Arsenal doonayn in ay la kulanto lacagta 50 milyan ee gini ah ee ay Foxes ku doonayso xidiga ree Algeria.
Kooxda Marseille ayaa aaminsan in ay boos fiican kaga jirto tartanka loogu jiro gool dhaliyaha ree France iyo kooxda Arsenal ee Olivier Giroud waxayna Marseille ku doonaysaa Giroud £24.7 milyan oo gini iyo waliba lacago kale oo dheeraad ah.